Vaovao - K-Tek & Exhibition
Fanodinana faritra mekanika mazava tsara
10 taona fanandramana amin'ny famokarana
Fanodinana ireo singa milina
Fikolokoloana CNC (Axis 3-4)
Mihodina ny CNC (Axis 2-12)
Famolavolana ny fizarana mazava
Fitsaboana farany sy hafanana
Fanodinana ny sehatry ny fitaovana
Fitaovana fanodinana fitaovana
K-Tek & Fampirantiana
Rehefa afaka folo taona ny fampandrosoana, K-Tek dia tsy vitan'ny hoe manana mpiasa matihanina sy teknika marobe ary ekipa fitantanana tena tsara, fa manana ekipa mpivarotra tena tsara koa. Mba hampahafantaran'ny mpanjifa bebe kokoa antsika, mandeha matetika amin'izao tontolo izao izahay handray anjara amin'ny fampirantiana, toa an'i Etazonia, Fanjakana Mitambatra, Alemanina, Japon sns. Hahafantatra mpanjifa marobe avy amin'ny fampiratiana izahay, tena afa-po amin'ny kalitaon'ny vokatra sy serivisinay izy ireo, miaraka amin'izay, maro ny mpanjifa vahiny tonga mitsidika ny orinasa K-Tek ary mifanakalo hevitra momba ny fiaraha-miasa. Ny fanohananao no lehibe indrindra fampaherezana ho antsika. Manantena koa izahay fa hanome serivisy fanodinana milina avo lenta ho an'ny mpanjifa mila izany. Manasa anao am-pahatsorana izahay hiara-hiasa sy hiara-mandroso.
Ny fitaovana iraisanay dia vy vy, aliminioma, varahina, vy ambany karbaona, plastika injeniera ary karazana vy hafa, Afaka manome fitsaboana hafanana sy fitsaboana isan-karazany ho an'ny mpanjifa koa izahay:
Ny serivisy fanodinana anay dia misy:
1) 5 Axis CNC Machining / CNC Milling / CNC Turning ；
2) EDM Wire-cutting / WEDM-HS / WEDM-LS ；
3) Fikolokoloana / fihodinana / Fitotoana.
Ny fitsaboana eto amintsika dia misy:
• Anodize (tsotra / Hard)
• Electroless Nickel (Inc.Black)
• Zinc Plating (Mainty / Oliva / Manga / ……)
• Fitaovana fanodinana simika
• Passivation (vy vy)
• Chrome Plating (Inc. Hard)
• Volafotsy / Volafotsy volamena
• Fipoahana fasika
• fanefitra vovoka
• Fametahana vifotsy
• PVD sns.
Ny K-Tek Machining dia manome serivisy OEM / ODM, azontsika atao ny manamboatra ny famokarana karazana milina mazava tsara mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, vokatra mifandraika amin'ny milina, elektronika, mandeha ho azy, fiara, fiara, angovo vaovao ary sehatra hafa. Ny orinasa dia manana fitaovana fikirakirana mazava tsara sy rafitra fitantanana kalitao henjana, ny kalitaon'ny ampahany mazava tsara dia afaka mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria manerantany, vokatra amidy any ivelany.
Maninona no mifidy antsika?
K-Tek dia manampahaizana manokana amin'ny fanodinana ampahany amin'ny milina. Ny serivisy manokana Integrated Services dia nanaja ny fahaizany sy ny fizotrany. Ny injenieranay dia hiara-hiasa aminao mba hiantohana ny kalitaon'ny endrika ambony indrindra ho an'ny famokarana sy ny fivoriambe. Ny serivisy sy ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa tena tsara dia marika mampiavaka ny orinasanay ary fototry ny fahombiazan'ny orinasanay. Azonao atao ny manantona: sales@k-tekmachining.com Tel: (+86) 0769-88459539
Fotoana fandefasana: Oktobra-29-2020
Manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana ny masinina ary nandalo ny fanamarinana ISO9001: 2015.
misoratra anarana amin'ny mailakao
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatray, azafady mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
Faritra indostrialy Xinhe, Distrikan'i Wanjiang, Tanànan'i Dongguan, faritanin'i Guangdong, Sina